Banyere Anyị - Hong Bang Packaging Co., Ltd.
Hong Bang Nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
guzosie ike na 2000, bụ a eru emeputa ke China ọkachamara plastic agba-ebi akwụkwọ na laminating mgbanwe nkwakọ ihe, agụụ metallized fim na multi-ọtọ fim.
Ngwaahịa anyị na-ekpuchi nri, kemịkalụ kwa ụbọchị, ọgwụ, agrochemicals, elektrọnik, ihe ụlọ na mpaghara ndị ọzọ. Ugbu a, anyị nwere ndị enyemaka atọ, Hong Bang (Hong Kong) Nkwakọ ngwaahịa, Hong Bang (HUIZHOU), nke ha niile na-enwe njem njem dị mfe ịbanye na Hong Kong na ọdụ ụgbọ mmiri ShenZhen.
Anyị factory emi odude ke HuiZhou.
Nabata na ileta omumu ihe anyi n’Ajighi.
Foto ndị ụlọ ọrụ
Anyị factory osobo ọkọlọtọ nke mechanization na akpaaka. Ndị ọrụ anyị site na ọzụzụ ọzụzụ ọkachamara, na-agbaso ụkpụrụ nrụpụta iji rụọ ọrụ. Ugbu a anyị ụlọ ọrụ na-onwem na ihe karịrị iri asatọ mmepụta edoghi gụnyere iri na anọ na agba na-ebi akwụkwọ, elu-ọsọ laminators, akpa Ndinam igwe na multi-ọtọ filming igwe.
Ihe osise ndi ozo
Anyị na-erube isi na-erube isi ISO9001, ISO14001 na ISO22000 management system, anyị nwetakwara BRC, FDA na 63 patents. Anyị na-enye nkwakọ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa, aghụghọ ma mepụta ụdị ngwaahịa dị iche iche mara mma. Ebe ọ bụ na anyị kwenyere na ọhụụ ga-eweta ọdịnihu magburu onwe ya, anyị na-etinye onwe anyị iji mepụta usoro nyocha na mmepe mmepe na ntọala ụlọ ọrụ hi-tech nke ngwugwu ngwugwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, site na imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ sayensị na China na mba. ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa a maara nke ọma. Raara nye nlezianya àgwà akara na-echebara ahịa ọrụ, anyị nwere ahụmahụ ndị ọrụ na-mgbe niile na-atụle gị chọrọ na hụ na gị afọ ojuju. Ma iwu gị dị obere ma ọ bụ buru ibu, dị mfe ma ọ bụ gbagwojuru anya, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Ezigbo ọrụ na afọ ojuju dịịrị gị mgbe niile.